HomeWararka MaantaBaraf Badan iyo qabow laga Filayo Qeybo kamid ah Sweden
Barafka da’ay 24-kii saac ee la soo dhaafay, gaar ahaan koonfurta Sweden ayaa dhibaato ka abuuray isu socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana dhowr jeer ka dhashay shilal baabuur.
Dhanka kale, khubarada saadaasha hawada ayaa filaya in baraf iyo roob badan ay ka da’aan koonfurta, halka ay aad u qabow noqon doonto meelo kale oo dalka ah.
Cimilo qabow ayaa laga filayaa Dalarna ilaa Jimcaha habeenkeeda. Heerkulka ayaa hoos u dhici kara ilaa 20 darajo Celsius, sida uu sheegay khabiirka saadaasha hawada ee SMHI Alexandra Olsson oo u sheegay wakaalada wararka Sweden ee TT.
Heerkulka wuxuu gaari doonaa ilaa toban darajo ka hooseeya eber ilaa Sabtida.
Baraf iyo roob kale ayaa la filayaa koonfur-galbeed Götaland, laga bilaabo galabnimada Jimcaha.
Xeebta Upland iyo xeebta koonfureed ee Norland waxay sidoo kale filan karaan roob maalmaha soo socda.